Taariikhda My Butros » Sida loo wajaho Haweenka Haddii aad tahay qof xishood badan?
Waxaad tahay nin xishood iyo khasaare Hooygiinuna ayaa aad qasbay inuu sii joogo hal dhan sannadahan.
War kor ku yaal aanu ku tilmaami xaaladdaada? Ma waxaad raadineysaa si sahlan loo soo dejin, laakiin siyaabo wax ku ool ah si ay uga takhalusi dhibaatada? Haddii ay haa tahay, dooda hoos ku qoran waa in aad ku caawin.
Si looga hortago Xishoon, baahnaan doontaa inaad leedahay rumaysad naftaada iyo gunaanadkii ah dhowr sababood ayaa kaa caawin kara inaad gaarto in rumaysadku. Akhri si aad u ogaato wixii dhab ahaan aad sameyn waa in.
Fiiri ku kalsoon
Waa run in mid ka mid ma beddeli karo isaga ama iyada muuqaalka. Sidaas darteed, Nin waxba ma samayn karno oo ku saabsan sida soo jiidasho uu u muuqdo, laakiinse hubaal isaga waa ay sameyn kartaa waxyaabo gaar ah si uu u eego kalsooni badan.
Waxaa la fahmi karaa in aad ku guuldareysteen inay u dhowaadaan haweeney kasta sababtoo ah xishood, laakiinse wax waa in aad sidoo kale u fahmaan waa in mid kale ma jiro kale waxaad ka badan (iyo dadka u badan tahay dhowr ah oo aad u kuu dhow) waa ogyahay inaad tahay qof xishood badan.
Sidaas, waxaad si fudud isku dayi kartaa in dhexdarsamayaan dadka aan iyaga loo oggolaado in ay fahmaan in aad tahay mid ka mid ah kuwa reserved (akhri xishood) rag kuwaas oo mar walba iska daayeen gabdhaha. Tani waxay fududeyn doontaa in aad dadow bashfulness; marka aad maamuli in ay sameeyaan taasi cover-up si guul leh, waxaad si toos ah u bilaabi doonaa dareemayaa kalsooni badan.
Si aad u eegto kalsooni ku qaba waa in aad sidoo kale waxoogaa on sida aad u labistaan ​​diirada. Iska ilaali inay xidhaan dhar uma uu oggolaan doonaa inaad taagan dadkii badnaa. Ha, ma waxaad u baahan doontaa in aad xirato kuwa surwaalka dhaadheer iyo maaliyada oo midabka nuuraayo leh in la arko in dadkii badnaa. Dharkaaga Kaliya dooro yara macquul ah; haddii aad xirato dharka eegi wanaagsan aad ku, waxaad si toos ah dhulkooda doonaa dareenka haweenka ee kuu dhow,.
Hayso ujeedooyinka macquul
Ma ku talo jirtaa inaad ku biiritaankiisa gabadha ugu caansan oo inta badan soo jiidasho ku xeeran? Sida nin xishood, waa inaad ka fogaataa isku dayaya in.
Waa run in Xishoon waxayna hoos u dhigi doontaa si weyn marka aad bilowdo in aad eegto kalsooni badan, laakiin taasi macnaheedu ma aha in aad u noqday smart ku filan si ay u soo jiidan gabar ugu kulul ku xeeran.
Gabar kasta oo horeba waa loo jecel yahay oo lagu yaqaan ka mid ah ugu soo jiidashada badan ee iyada koox sida caadiga ah aad bay u ku kalsoon yahay. The kalsooni aad aad u dhawaan soo ururay ma noqon doonto ku filan inay u dhowaadaan gabar sida a; iyada kalsooni idinkaa iska jebin doonaa xilliga aad soo dhowaaw doonaa.
Sidaas, aad Ujeedada waa in la helo gabar ku habboon heer aad; mar walba ka fogaadaan u dhowaanin haweenka in aad u cabsi geliyaan.
Ha ka baqimayno samaynta xiriirka indhaha
Marka aad ugu dambeyntii u Dhawaanina qof, ha ka baqimayno samaynta xiriirka indhaha. Haweenka si fudud wooed markii nin fiiriya indhaha iyaga oo aan xishood kasta.
Tani waa, Si kastaba ha ahaatee, Dabcan waa howsha ugu adag tahay nin xishood abid lagu weydiin karaa in ay sameeyaan; laakiin, mar i.e ah caqabada koowaad. dhowaanin haweeney ay baxaday u baahnaan doontaa inaad saaray dadaalka ugu wanaagsan ee aad u gudbaan soo socda.
Samaynta xiriirka indhaha waa fududdahay ka badan waxa aad dhab ahayna. Ka dib markii xiriirka indhaha, isku day in aad sii wado muddo dhowr miridh ah; hubaal aad isku yaacsanaan bilowga tegi.
The talooyin kor ku xusan waa in lagaaga caawiyo in aad inay ka soo baxaan qolof of Xishoon. Kale oo ka socda raacdid, waxa kale oo aad ka shaqayn kartaa hagaajinta xirfadaha wada sheekeysi ah iyo cadayashada dareen kaftan aad.